Nzira Yekusimbisa Yenyu Yechokwadi YeEmail Yako Yakagadzirwa Zvakanaka (DKIM, DMARC, SPF) | Martech Zone
Maitiro eKusimbisa Yako Imeyili Yekusimbisa Yakamisikidzwa Zvakanaka (DKIM, DMARC, SPF)
Chipiri, January 25, 2022 Chitatu, Ndira 26, 2022 Douglas Karr
Kana iwe uchitumira email kune chero mhando yevhoriyamu, iindasitiri yaunofungidzirwa kuti une mhosva uye unofanirwa kuratidza kusava nemhosva kwako. Isu tinoshanda nemakambani mazhinji tichivabatsira nekufambisa kwavo email, kudziya kweIP, uye nyaya dzekutumira. Makambani mazhinji haatombozivi kuti ane dambudziko zvachose.
Matambudziko Asingaoneki eKununurwa
Pane matambudziko matatu asingaonekwe ane email kuendesa ayo mabhizinesi asingazive:
Chirevo - Email sevhisi vanopa (kunyanya) tonga mvumo yekupinda-… asi mupi webasa reinternet (ISP) inobata gedhi reiyo email kero yekuenda. Iro hurongwa hunotyisa chaizvo. Iwe unogona kuita zvese nemazvo sebhizinesi kuti uwane mvumo uye email kero, uye ISP haina zano uye inogona kukuvhara zvakadaro.
Inbox Kuiswa - ESPs inosimudzira yakakwirira kuburitswa mitengo idzo dzisina maturo. Iyo email inotumirwa yakananga kune junk folda uye isina kumboonekwa nemunyoreri wako email inounzwa nehunyanzvi. Kuti unyatso ongorora yako inbox kuiswa, unofanira kushandisa runyoro rwembeu woenda kunotarisa kuISP yega yega. Kune masevhisi anoita izvi.
Mukurumbira -ISPs uye yechitatu-bato masevhisi zvakare inochengetedza mukurumbira zvibodzwa zvekutumira IP kero yeemail yako. Kune mablacklist anogona kushandiswa neISP kuvharisa email yako yese zvachose, kana kuti ungave uine mukurumbira wakashata izvo zvingaite kuti uendeswe kune zvisina basa folda. Pane akati wandei masevhisi aunogona kushandisa kutarisa IP yako mukurumbira… asi ndingave ndisine tariro nekuti vazhinji havanyatso nzwisisa mune yega yega ISPs algorithms.
Maitiro akanakisa ekudzikisa chero nyaya dzekuiswa kwebhokisi ndeyekuona kuti wamisa akati wandei maDNS marekodhi ayo ISPs anogona kushandisa kutarisa kumusoro uye kuona kuti maemail auri kutumira anotumirwa zvechokwadi newe kwete nemunhu anonyepedzera kuve kambani yako. . Izvi zvinoitwa kuburikidza nehuwandu hwemazinga:
Sender Policy Sisitimu (SPF) - chiyero chekare chakatenderedza, apa ndipo paunonyoresa rekodhi yeTXT pane yako dhizaini kunyoresa (DNS) iyo inotaura kuti ndeapi madomasi kana IP kero yauri kutumira email kubva kukambani yako. Semuenzaniso, ndinotumira email kune Martech Zone kubva Google workspace uye kubva CircuPress (yangu ESP parizvino iri mubeta). Ndine SMTP plugin pawebhusaiti yangu kuti nditumirewo kuburikidza neGoogle, zvikasadaro ndingadai ndine IP kero inosanganisirwa pane iyi zvakare.
Domain-yakavakirwa Mharidzo Yechokwadi, Kushuma uye Conformance (DMARC) - iyi chiyero chitsva chine kiyi yakavharidzirwa mairi inogona kusimbisa zvese zvangu domain uye mutumiri. Kiyi yega yega inogadzirwa nemutumiri wangu, kuve nechokwadi chekuti maemail anotumirwa nespammer haagone kukanganisa. Kana uri kushandisa Google Workspace, hezvino nzira yekumisikidza DMARC.
DomainKeys Identified Mail (DKIM) - Kushanda pamwe chete nerekodhi reDMARC, rekodhi iyi inozivisa ISPs mabatiro emitemo yangu yeDMARC neSPF pamwe nekutumira chero mishumo yekuunza. Ini ndinoda maISPs kuti varambe chero meseji isingapfuure DKIM kana SPF, uye ndinoda kuti vatumire mishumo kune iyo email kero.
Zviratidzo zveBrand zvekuzivisa Mharidzo (BIMI) - iyo nyowani yekuwedzera, BIMI inopa nzira yeISPs uye yavo email maapplication kuratidza logo yemhando mukati meiyo email mutengi. Kune ese akavhurika mwero pamwe ne encrypted standard yeGmail kwaunodawo chitupa chakavharidzirwa. Iwo macertificate anodhura chaizvo saka handisati ndazviita izvozvi.
CHERECHEDZA: Kana iwe uchida rubatsiro pakumisikidza chero email yako yechokwadi, usazeza kusvika kune yangu firm. Highbridge. Tine timu ye email marketing uye deliverability nyanzvi izvo zvinogona kubatsira.
Maitiro eKusimbisa Yako Email Kusimbisa
Yese yeruzivo rwekunobva, relay ruzivo, uye ruzivo rwekusimbisa rwakabatana neemail yega yega inowanikwa mukati memeseji misoro. Kana iwe uri nyanzvi yekuburitsa, kududzira izvi zviri nyore… asi kana uri mudzidzi, zvakaoma zvikuru. Hezvino izvo musoro wemeseji unotaridzika seyetsamba yedu, ndabvisa mamwe maemail e autoresponse uye ruzivo rwemushandirapamwe:
Ukaverenga uchipedza, unogona kuona kuti mitemo yangu yeDKIM ndeipi, ingave DMARC ikapfuura (haisi) uye kuti SPF inopfuura… asi ibasa rakawanda. Pane iri nani workaround, zvakadaro, uye ndiko kushandisa DKIMValidator. DKIMValidator inokupa email kero yaunokwanisa kuwedzera kune yako tsamba yetsamba kana kutumira kuburikidza neemail yehofisi yako… uye vanoshandura ruzivo rwemusoro kuita mushumo wakanaka:
Chekutanga, inosimbisa yangu DMARC encryption uye DKIM siginecha kuti uone kana ichipfuura kana kwete (haiti).
Zvadaro, inotarisa rekodhi yangu yeSPF kuti ione kana ichipfuura (inoita):
Uye chekupedzisira, inondipa nzwisiso pane meseji pachayo uye kana zvirimo zvingaratidza mamwe maturusi ekuona eSPAM, anotarisa kuti aone kana ndiri pamablacklists, uye anondiudza kana zvichikurudzirwa kutumirwa kune junk folda:
Ita shuwa yekuyedza ese ESP kana yechitatu-bato mameseji sevhisi iyo kambani yako iri kutumira email kubva kuti uve nechokwadi chekuti Email yako Yekusimbisa yakasetwa nemazvo!
Edza Imeyili Yako NeDKIM Validator
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu yakabatana link ye Google workspace munyaya ino.
Tags: Zviratidzo zveBrand zvekuzivisa Mharidzokuburitswadkimdkim siginechadkim validatorDMARCDNSDomain-based Meseji KusimbiswaDomainKeys Identified Mailemail kusimbiswanzira yekuedza dkimmaitiro ekuedza dmarcReporting uye Conformancesender mutemo mamirirospf
Iyo Entity Resolution Inowedzera Kukosha kune Yako Matanho Ekushambadzira